आफ्नै आँखा अगाडि श्रीमतीलाई गुमाएपछि भन्छन्: “कसैले पनि यसरी ज्यान गुमाउन नपरोस्” - Sidha News
आफ्नै आँखा अगाडि श्रीमतीलाई गुमाएपछि भन्छन्: “कसैले पनि यसरी ज्यान गुमाउन नपरोस्”
पोखरा । २५ वर्षीया गर्भवती श्रीमतीलाई कोभिड देखिएपछि तनहुँ भानुका ३४ वर्षीय युवकले घरमै रेखदेख गरिरहेका थिए । शुक्रबार राति पेट दुखेपछि एक बजेतिर पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा ल्याए । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड वार्डमा उपचार सुरु भयो ।
चिकित्सकले सल्लाहअनुसार अपरेसन गरेर बच्चा निकालियो । आमा र बच्चा दुबैको स्वास्थ्य राम्रो हुँदै थियो । अब त घर जाउँला भनेको बेला बिहीबार राति नसोचेको घटना भयो । एक्कासी अक्सिजन सकिएपछि आफ्नै आँखा अगाडि श्रीमतीलाई गुमाउनु परेको उनले सुनाए ।
‘मैले डाक्टर र नर्सको ढोका ढक्ढक्याउँदै हिँडे । अक्सिजन नआएपछि हामीले के गर्न सकिन्छ र भनेर तर्किए,’ उनले भक्कानिँदै भने, ‘अक्सिजन आउला र उनको ज्यान बच्ला भन्ने लागेको थियो । तर अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव लेखेर टाँसेर डाक्टर हिँडे ।’
शुक्रबार नेपाली सेनाको टोलीले शव व्यवस्थापनको तयारी गरिरँहदा उनी अक्सिजन जुटाउन नसकेकोमा चुक्चुकाइरहेका थिए । अक्सिजन सकिन लागेको थाहा पाएपछि उनका भाञ्जा अक्सिजन जुटाउन हारगुहार गर्दै पोखरा अक्सिजन उद्योगमै पुगेका थिए, तर पाएनन् ।
‘कतैबाट एक सिलिन्डर अक्सिजन जुटाउन पाएको भए बाँच्ने थिइन् कि ?’ सिमसिम पानी छल्न अस्पताल परिसरमै ओत लागेर बसिरहेका उनले भने, ‘कसलै पनि यसरी ज्यान गुमाउन नपरोस् ।’
बिहीबारको यो घटनामा २५ वर्षीया गर्भवतीसहित ८ जनाले मृ’त्युवरण गर्नुपरेको छ । प्रदेशकै ठूलो अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नुहँदा यो अवस्था आएको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
अक्सिजन अभावले धेरैको ज्यान गएको सार्वजनिक भएपछि अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. शरद बराल निकै दबाबमा देखिए । ‘फोन बजेको बज्यै छ, कहिले माथिबाट भन्छन् कहिले प्रदेश सरकारबाट । कहिले सिडिओ सा’बको फोन आउँछ,’ डा. बरालले भने, ‘भर्खरै अस्पताल प्रशासनलाई बिफ्रिङ गरें । मिडियाकर्मीले सोधिरहेका छन् ।’
उनका अनुसार अस्पतालमा पछिल्लो समय हाइ–फ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको थियो । तीन दिनदेखि अक्सिजन आपूर्तिमा भने समस्या हुन थालेको थियो । व्यवस्थापनका लागि प्रयास गर्दागर्दै बिहीबार समयमै अक्सिजन आपूर्ति नहुँदा मानवीय क्षति बेहोर्नुपरेको डा. बरालले बताए । ‘चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले हरसम्भव प्रयास गरेकै छन्, तर पनि गम्भीर बिरामीको ज्यान गयो,’ उनले भने ।
प्रतिष्ठानमा अहिले ८५ जना कोभिडका बिरामीको उपचार भइरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र यहाँ १० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अन्य बिरामीको पनि उपचार हुने प्रतिष्ठानमा कोभिडका बिरामीको उपचारमा निकै सकसपूर्ण बनेको चिकित्सक बताउँछन् ।
वैशाख १४ गतेबाट कोभिड उपचार सुरु भएको अस्पतालमा ४० भन्दा बढीको मृ’त्यु भइसकेको छ । ४० बेडबाट सेवा सुरु गरेको यो अस्पतालमा कोभिड वेड २०० पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । तर फोकल पर्सन बराल भन्छन्, ‘निजी अक्सिजनको भरमा अब कोभिड बेड थप्न सकिन्न । हतियारबिनाको सिपाही के काम ?’